﻿ बक्राह खोलाको बाढी गाउँ पस्ने खतरा
बक्राह खोलाको बाढी गाउँ पस्ने खतरा
दमक । वर्षेनी बक्राह खोलाको कटानले मोरङका विभिन्न गाउँमा गाउँमा त्रास उत्पन्न हुने गरेको छ । वर्षायाममा खोलामा पानीको वाहव बढ्दैगए पछि कटान सुरु हुन्छ र गाउँमा बाढी पस्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि धेरै मानिस विस्थापित हुनुपरेको थियो ।
त्यस्तै यसवर्षपनि कटानले मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अधिकांश घर जोखिममा परेको छ । खोलाको सतह बस्ती भन्दा अग्लो बनेपछि बाँध फुटाएर बाढी पस्ने भएपछि वर्षायाममा गाउँपालिकाका अधिकांश घर जोखिममा परेको हो । गाउँ जोखिममा परेसँगै स्थानीयहरु त्रसित बन्न थालेका छन् ।
बाढीले मिक्लाजुङ वार्ड नं. ६ बेतेनीमा खेती योग्य जमिन कटान गर्न सुरु गरेको छ । गत वर्ष पनि असार ७ मा आएको बाढीले साविक मधुमल्ला ४,५ को धप्परटोल र मधुमल्ला ५ को बेतेनीमा बाँधफोडी गाउँ पस्दा सयौं घरपरिवार विस्थापित भएका थिए ।
यसपाली पनि मधुमल्ला ४ र ५ को सिमानामा बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि मधुमल्ला ५ बेतेनीमा खोला बस्तीबाट नै बगिरहेको छ । खोलाले गत बर्ष बगेको ठाउँ भन्दा केही पश्चिम खेती योग्य जमीन र मानव बस्तीमा कटान सुरु गरेको छ।
सोमबार मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवी प्रसाद आचार्य, वाड नं. ६ का वडा अध्यक्ष बुद्धीलला निरौला र वार्ड नं. ९ का वडा अध्यक्ष सोमनथ अधीकारी सहितको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । तत्कालका खोलाको धार परिवर्तन गर्ने र बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन कटानको समस्यालाई रोक्न पहल गरिने बताए ।